အိုးဝေ: ဗုဒ္ဓဂါယာသို့ ဘုရားဖူးသွားခြင်း (၁)။
Posted by စစ်ကိုင်းသူ at 10:35 PM
နိုင်းနဒီ May 23, 2008 at 12:05 AM
သာဓု. သာဓု. သာဓု.
ဇနိ May 23, 2008 at 6:01 AM
မရောက်ဘူးတဲ့ ဒေသကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ ရေးထားတာဆိုတော့ ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားရသလိုပါပဲ။
မြန်မာပြည်ကြီး နေကောင်းပါစေလို့ရော ဆုတောင်ခဲ့လား။
ဒီစာအတွက် ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ပါတယ်။
မဇနိ May 23, 2008 at 6:41 AM
စိတ်မှန်းနဲ့ပဲ ပို့စ်ဖတ်ရင်း သွားလိုက်တယ်
ဓါတ်ပုံတွေလဲ ကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်
အတော် ကုသိုလ်ထူးလို့ သွားရတာ
စစ်ကိုင်းသူ May 23, 2008 at 8:12 AM
နိုင်းနဒီ သာဓုခေါ်သွားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် အလင်းရောင်ကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ကိုဇနိ မြန်မာပြည်အတွက်တင် ဘယ်ကမလဲ ကိုဇနိတို့ အတွက်ပါ ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ မသွားခင်က ပြောသွားတယ်လေ။ မေ့သွားပြီလား။ ပြီးရင်သာ စစ်ကိုင်းသူဆီမှာ ကျောင်းလာအပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော။
မဇနိရေ ကုသိုလ်ထူးလို့ သွားရတာတောင် စစ်ကိုင်းသူရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ကျရင် ဆက်ရေးပါ့မယ်။
မဇနိ May 23, 2008 at 8:24 AM
စစ်ကိုင်းသူရဲ့ လွဲပုံ ချော်ပုံလေးတွေ ပြောပြပါအုံး။
tmn May 23, 2008 at 10:43 AM
အရင်တုန်းက မာမာအေးဆိုတဲ့သီချင်းနားထောင်ဘူးတယ်…စာအုပ်တွေထဲမှာရယ်ဖတ်ဘူးတယ်… နေရာနာမည်တွေတော့ရင်းနှီးနေသလိုပဲ…အခုတော့ နေရာအမည်တွေကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ကြည့်ရတော့ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပဲဗျို့… အခွင့်သာရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ချင်သေးတယ်ဗျာ… နောက်တင်မယ့် ပို့စ်ကိုလည်း ဖတ်ချင်သေးတယ်ဗျို့…
မောင်ဖြူ May 23, 2008 at 1:48 PM
k4 May 23, 2008 at 2:12 PM